'UMLAWULI WEBRITNEY SPEARS' UMLAWULI UTHI 'WAZAMA YONKE INTO' UKUZE ANXIBELELANE NENKWENKWEZI - HULU
'Ukuhlela uBritney Spears' UMlawuli uthi Wazama yonke into ukuba anxibelelane neNkwenkwezi
Nini INew York Times ikhoyo Uxwebhu Ukubiyela uBritney Spears Ithathwe kwiveki yokugqibela kaHulu, bekukho umntu ocacileyo ukuba ebengekho kudliwanondlebe nangona kunjalo ebesasazeka kulo lonke eli thuba: UBritney Spears ngokwakhe. Ngelixa i-doc entsha ityhila ukunyuka kwe-Spears njenge-pop icon kunye ne-conservatorship yangoku ahlala phantsi kwayo ukusukela ngo-2008, i-Spears ayiboniswanga ngaphandle kweeklipthi ezindala zodliwanondlebe okanye imidlalo. Kudliwanondlebe kunye Ukuzonwabisa ngokuhlwanje , Ukubiyela uBritney Spears Umlawuli uSamantha Stark uchaze ukuba kutheni le bhanyabhanya ingakhange ingene kwimvumi eyaziwayo.
Ngelixa uStark kunye nabasebenzi bakhe befuna ukuva umbono we-Spears, ukwenza kwabo iinzame zokunxibelelana neenkwenkwezi akuphumelelanga. Nokuba amandla e-New York Times, elinye lawona maphepha aziwayo kwaye ahlonelwayo kwisizwe, ebengonelanga ukukhusela udliwanondlebe ne-Spears, kuchazwe uStark. Amaxesha amaninzi njenge-New York Times, ukuba ndingathanda ukwenza udliwanondlebe naye nabani na owaziwayo, ndingachaza intatheli yakhe ndize ndithi, 'Ungasithumela esi sicelo kulo mntu?' utshilo. Iziganeko ezininzi, umntu othile uya kuvavanya kwaye ayinike kwakhona kwintatheli.
Kodwa asicacanga ukuba yenzekile okanye ayenzekanga, uqhubeke. Sihambe ngendlela zezi ndawo ziqhelekileyo, emva koko sahamba ngendlela yabantu abamaziyo okanye abazi abantu abamaziyo ukuba bafake izicelo. wabamkela. Abasebenzi beNew York Times bazame yonke indawo, bade badubula imvumi i-DM, nangona kunjalo khange iphinde ive.
Kuba u-Britney unesangqa esifanelekileyo kuye, ngesiqingatha ngenxa yolondolozo-okanye kuvunyelwe ukuba kube yile ndlela ngenxa yolondolozo-intatheli khange zikwazi ukuxoxa naye ngokukhululekileyo, utshilo uStark. Thina, njenge The New York Times, khange sidlan 'indlebe naye, ngenxa yokuba sinqwenela ukuba nethuba lokuyenza ngokukhululekileyo kungekho mntu uzama ukulawula oko akutshoyo okanye into. Kubonakala nje ngokungathi ngekhe ubuze uBritney.
Ngelixa uStark wayengekho kwimeko yokutshixa udliwanondlebe kunye nesihloko esisiseko somdlalo bhanyabhanya, weva kumanani afana noVivian Lee Thoreen, igqwetha elisebenza noJamie Spears, kunye noAdam Streisand, igqwetha elazama ukunceda abakwaSpears xa yena Ukulondolozwa okokuqala kwasekwa. Amaxesha ongezelelweyo afumene ukunxibelelana noFelicia Culotta, owayengumncedisi weSpars kunye nomhlobo olungileyo.
UFelicia ngomnye wabantu abachitha ixesha elininzi noBritney, owaziyo uBritney omkhulu, utshilo uStark. Ndiyakhumbula ukuba uFelicia wathi kum, 'Wonke umntu uzama ukwazi ukuba yintoni ese-Britney's coronary heart, kwaye bambalwa kakhulu abo bazi into esekhayeni lakhe.' Kwaye abantu bayayigcina loo nto… Kwakunzima kakhulu unabantu abathetha ngaye kwaye bacinge. Ke, abantu abaninzi bafuna ukutsho ucezu lwabo olupheleleyo kuBritney, kwaye abazi. Kodwa uFelicia uyamazi. Ngokuka-Stark, i-Spears kunye neCulotta nangona kunjalo zinxulumene nanamhlanje.
Nangona uStark wayekwisikhundla sokupeyinta umfanekiso wobomi be-Spears ngenxa yezihloko zodliwanondlebe kunye nemifanekiso eqingqiweyo ebhalwe kumdlalo bhanyabhanya, wavuma ukuba kukho idabi elikhulu lokuziphatha ukubalisa ibali likaSpars ngokuthatha kwakhe inxaxheba. Inye into ebendinomdla ngayo ngeli xesha lipheleleyo kunzima, utshilo. Ndicinga ukuba ndiza kuthi kuye, 'Nditsalele umnxeba. Ndingathanda ukuva inkalo yakho. '
Intloko kwi Ukuzonwabisa ngokuhlwanje ukufunda intsalela yodliwanondlebe lukaStark, kwaye ubukele Ukubiyela uBritney Spears ngoku kwiHulu nakwiFX.
Izigaba: Tech-Iindaba Hollywood Inetflix
I-Chrissy ekhulelweyo yeTeigen ityhila i-1 yokuQala ukujonga ukuQala komntwana wayo uBump: Ifoto
Ukukhupha yonke! UChrissy Teigen wenza amatyala kumntwana wakhe ohamba ze engaphantsi kweeveki ezimbini emva kokuba yena nomyeni wakhe uJohn Legend bezise ukuba balindele enye
UBryan Tanaka Biography, Ubudala, ukubaluleka kweNet, ubude, i-Wiki
URuth Bader Ginsburg Usweleke eneminyaka engama-87: INkundla ePhakamileyo yezoBulungisa ifa
I-Nia Sioux Biography, Ubudala, ukubaluleka kweNet, ubude, i-Wiki
U-Erin Napier ubonakalisa ukuhlala kwiDolophu enye uBomi bakhe bonke
'Umlawuli weBatman' wabelana ngenkangeleko entsha kaRobert Pattinson-inkwenkwezi ngoSuku lweBatman
UMinka Kelly-ukubaluleka kweNet, i-Bio, i-Wiki, ubudala, i-Career, ubude, umhla wokuzalwa
I-China, e-Nudge eya e-U.S, yenza iSithembiso esitsha sokuSombulula ukuShushubeza kweHlabathi
UMdali weCobra Kai utyhila ukuba kutheni uAmanda uLarusso enguMpawu oBalulekileyo
Inkokheli yebhunga laseNewcastle ithi ayicacanga ukuba ngubani oza kuba noxanduva kuthintelo lweCovid
U-Joy-Anna Duggar Forsyth-Ubungakanani benethi, i-Bio, iWiki, ubudala, uKhathalelo, ubude, umhla wokuzalwa
Rapper Silento Uhlawuliswe ngohlaselo luka Felony emva kohlaselo lwe Hatchet
Yonke iflethi okanye indlu ekwicomplex 1 ibhedi
chaza ixabiso lentengo yexabiso
andrea bocelli amehlo ombala
ndingajonga phi ixesha le-supergirl 6
zonke 33 itanki yokrebe